Lixabise Ilungelo Onalo Lokusebenza NoYehova! | Funda
Niya Kuba ‘Bubukumkani Nababingeleli’
IBALI LOBOMI Iimbalasane Zobomi Bam Bokusebenzela UBukumkani
Lixabise Ilungelo Onalo Lokusebenza NoYehova!
“Gcinani Iingqondo Zenu Zimiliselwe Kwizinto Zaphezulu”
IMboniselo (Yokufundisa) | Oktobha 2014
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Intetho Yezandla yaseArgentina Intetho Yezandla yaseBrazil Intetho Yezandla yaseColombia Intetho Yezandla yaseItali Intetho Yezandla yaseJapan Intetho Yezandla yaseMexico Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBengali IsiBhulu IsiBicol IsiBislama IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitonga (SaseMalawi) IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCinyanja IsiCreole saseHaiti IsiCreole saseMauritius IsiCreole saseSeychelles IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiDrehu IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGrike IsiGuarani IsiGujarati IsiGun IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKannada IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKiluba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiKwangali IsiKwanyama IsiLatvia IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLunda IsiLuo IsiLuvale IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMarathi IsiMaya IsiMixe IsiMongolia IsiMoore IsiNdebele IsiNdonga IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiOromo IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseAncash) IsiQuechua (saseAyacucho) IsiQuechua (saseBolivia) IsiQuechua (saseCuzco) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwati IsiSwedish IsiTagalog IsiTajiki IsiTamil IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTurkmen IsiTurkmen (SesiCyrillic) IsiTwi IsiTzotzil IsiUkrainian IsiUrdu IsiUzbek IsiVenda IsiVietnam IsiWaray-Waray IsiWayuunaiki IsiWolaita IsiXhosa IsiZande IsiZulu isi-Igbo isiWallisian
“Singabasebenzi abangamadlelane kaThixo.”—1 KOR. 3:9.
Liliphi ilungelo ebebesoloko benalo abakhonzi bakaYehova?
Nguwuphi umsebenzi esimele siwuxabise kakhulu ngoku?
Liliphi ithemba elivuyisayo esinalo ngekamva?
1. UYehova uvakalelwa njani ngomsebenzi, ibe oko kumbangele ukuba enze ntoni?
UYEHOVA uyawuthanda umsebenzi. (INdu. 135:6; Yoh. 5:17) Ukuze iingelosi nabantu abadalileyo bonwabe baze bafumane ulwaneliseko kwizinto abaziphumezileyo, uYehova ubanike umsebenzi omnandi. Ngokomzekelo, xa wayedala, wasebenza nezibulo lakhe. (Funda amaKolose 1:15, 16.) IBhayibhile isixelela ukuba ngaphambi kokuba eze emhlabeni, uYesu wayesecaleni kukaThixo ezulwini “njengomsebénzi onobuchule.”—IMize. 8:30.
2. Yintoni ebonisa ukuba iingelosi bezisoloko zinomsebenzi obalulekileyo nowanelisayo?
2 IBhayibhile izele yimizekelo ebonisa ukuba uYehova ebesoloko ezipha umsebenzi iingelosi. Emva kokuba uAdam noEva bonile baza bagxothwa kwikhaya labo elaliyiParadesi, uThixo “wamisa ngasempuma komyezo wase-Eden iikherubhi nencakuba yekrele enelangatye nejikajikayo ukuba iqhubeke ilinde indlela eya emthini wobomi.” (Gen. 3:24) NeSityhilelo 22:6 sibonisa ukuba uYehova “wathumela ingelosi yakhe ukuba ibonise amakhoboka akhe izinto ezimele zenzeke kamsinya.”
3. UYesu wawulandela njani umzekelo kaYise xa wayesemhlabeni?
3 Xa wayesemhlabeni, uYesu wayewukhuthalele umsebenzi awayewunikwe nguYehova. Elandela umzekelo kaYise, naye uYesu wanika abafundi bakhe umsebenzi. Ebenza bakhangele phambili kwizinto ababeza kuziphumeza, wathi: “Inene, inene, ndithi kuni, Lowo ubonisa ukholo kum, naye lowo uya kwenza imisebenzi endiyenzayo; yaye uya kwenza imisebenzi emikhulu kunale, ngenxa yokuba ndiyemka ndiya kuBawo.” (Yoh. 14:12) Ebalaselisa ukungxamiseka komsebenzi ababeza kuwenza, waphinda wathi: “Simele siyisebenze imisebenzi yalowo undithumileyo ngoxa kusesemini; ubusuku buyeza xa kungayi kubakho mntu unako ukusebenza.”—Yoh. 9:4.
4-6. (a) Kutheni simele sibe nombulelo kuba uNowa noMoses bawenza umsebenzi ababewunikwe nguYehova? (b) Ufana ngantoni wonke umsebenzi uThixo awunika abantu?
4 Nangaphambi komhla kaYesu, abantu babenomsebenzi owanelisayo. Nangona uAdam noEva bengazange bawenze umsebenzi ababewunikiwe, bakhona abantu abamthobelayo uThixo. (Gen. 1:28) UNowa wanikwa imiyalelo engqalileyo yendlela awayemele awakhe ngayo umkhombe owawuza kusindisa abantu ngoNogumbe. Wayenza yonke into awayeyixelelwa nguYehova. Silapha nje, kungenxa yoko kuthobela kwakhe!—Gen. 6:14-16, 22; 2 Pet. 2:5.
5 UMoses wanikwa imiyalelo eneenkcukacha ezicacileyo zendlela yokwakha umnquba nokulungelelanisa ababingeleli, ibe wayithobela yonke loo miyalelo. (Eks. 39:32; 40:12-16) Sisangenelwa nanamhlanje yindlela awawenza ngayo ngokuthembeka loo msebenzi. Njani? Umpostile uPawulos wathi ezo nxalenye zoMthetho zazifuzisela ‘izinto ezilungileyo ezaziza kuza.’—Heb. 9:1-5, 9; 10:1.
6 Umsebenzi uThixo awunika abakhonzi bakhe uxhomekeka kwindlela ezaliseka ngayo injongo yakhe. Sekunjalo, umsebenzi abanika wona ubusoloko umzukisa uYehova yaye uluncedo ebantwini. Kunjalo nangomsebenzi obusenziwa nguYesu, ngaphambi kokuba eze emhlabeni naxa wayelapha. (Yoh. 4:34; 17:4) Ngokufanayo, umsebenzi esiwunikiweyo namhlanje uzukisa uYehova. (Mat. 5:16; funda eyoku-1 kwabaseKorinte 15:58.) Kutheni kunjalo nje?
UKUWUJONGA UMSEBENZI NGENDLELA EFANELEKILEYO
7, 8. (a) Yiyiphi imisebenzi amaKristu anelungelo lokuyenza? (b) Simele senze ntoni xa uYehova esalathisa?
7 Umel’ ukuba uyavuma ukuba iyamangalisa into yokuba uYehova ejizeke abantu abangafezekanga ngelungelo lokusebenza kunye naye. (1 Kor. 3:9) Abo bancedisa ekwakhiweni kweeHolo zeNdibano, iiHolo zoBukumkani kunye nezakhiwo zamasebe benza umsebenzi ofana nowawusenziwa nguNowa noMoses. Enoba uncedisa ekulungiseni iHolo yoBukumkani okanye ekwakhiweni kwekomkhulu lethu eliseWarwick, eNew York, lixabise elo lungelo. (Jonga umfanekiso osekuqaleni.) Yinkonzo engcwele leyo. Noko ke, amaKristu amaninzi enza umsebenzi wokwakha ngokomoya, umsebenzi wokushumayela. Nawo lo umsebenzi wenzelwe ukuzukisa uYehova nokunceda abantu abathobelayo. (IZe. 13:47-49) Intlangano kaThixo iyasixelela indlela emasiwenze ngayo lo msebenzi. Maxa wambi, isenokusinika izabelo ezitsha.
8 Abakhonzi bakaYehova abathembekileyo basoloko bekulungele ukuthobela ulwalathiso oluvela kuye. (Funda amaHebhere 13:7, 17.) Ekuqaleni sisenokungaziqondi izizathu zokuba simele siwenze ngendlela ethile umsebenzi esiwunikiweyo. Sekunjalo, siyazi ukuba kuya kusinceda ukuhambisana nalo naluphi na utshintsho uYehova alwenzayo.
9. Abadala baba ngumzekelo omhle njani ebandleni ngokuphathelele umsebenzi?
9 Abadala babonisa ukuba bakulungele ukwenza ukuthanda kukaYehova ngendlela abakhokela ngayo ebandleni. (2 Kor. 1:24; 1 Tes. 5:12, 13) Basebenza nzima yaye bahambisana nalo naluphi na utshintsho olukhoyo. Bathobela naluphi na utshintsho olwenziwayo kwindlela omele wenziwe ngayo umsebenzi wokushumayela ngoBukumkani bukaThixo. Nangona abanye beye baba mathidala ekuqaleni ukushumayela ngefowuni, ukushumayela kumazibuko nasesidlangalaleni, kungekudala baye bafumana imiphumo emihle. Ngokomzekelo, oovulindlela abane baseJamani bagqiba kwelokuba khe bashumayele kumashishini ekwagqityelwa kudala ukushunyayelwa kuwo. UMichael uthi: “Kwakusele kudlule iminyaka singashumayeli kumashishini, ngoko sasisoyika. Mhlawumbi uYehova wayibona loo nto, kuba kwaba mnandi ngaloo ntsasa entsimini. Kwasinceda ukuthobela ulwalathiso olukuBulungiseleli Bethu BoBukumkani nokuthembela kuYehova!” Ngaba ukulungele ukuzama iindlela ezintsha zokushumayela kweyakho intsimi?
10. Luluphi utshintsho oluye lwenziwa eBheteli kutshanje?
10 Maxa wambi, kuye kufuneke kwenziwe utshintsho naseBheteli. Kutshanje, iiofisi zesebe ezininzi ziye zadityaniswa nezinye. Nangona olo tshintsho luye lwabangela ukuba abazalwana noodade abaninzi bahlengahlengise iimeko zabo, akukhange kube kudala ngaphambi kokuba zibonakale iingenelo zalo. (INtshu. 7:8) Abo bazalwana noodade bavuyiswa kukuba negalelo kumsebenzi oqhubekayo owenziwa ngabantu bakaYehova!
11-13. Bubuphi ubunzima ekuye kwafuneka bajongane nabo abanye ngenxa yotshintsho kwintlangano kaThixo?
11 Ininzi into esinokuyifunda kwabo baye bachaphazeleka kolu tshintsho. Abanye bebenamashumi eminyaka bekhonza kwiiBheteli zamazwe abo. Esinye isibini esasikhonza kwiBheteli encinane eCentral America, sacelwa ukuba siye kwiBheteli yaseMexico, ephantse iyiphindaphinde kayi-30 iBheteli esasikuyo. URogelio uthi: “Kwakunzima ukushiya abahlobo nezalamane.” UJuan, naye owacelwa ukuba afudukele eMexico, uthi: “Kuba ngathi uqala ubomi obutsha; kufuneka uqale phantsi uzame ukwenza abahlobo. Kufuneka uqhelane nendlela yalapho yokucinga nokwenza izinto.”
12 Abazalwana noodade ababeseBheteli kumazwe aseYurophu abacelwa ukuba bafudukele kwiBheteli eseJamani, kwafuneka beqhelene nendlela entsha yokuphila. Nabani na ozithandayo iintaba unokuyiqonda indlela ekwakunzima ngayo ukushiya iintaba ezithi ndijonge zaseSwitzerland. Nabo baseOstriya babebukhumbula ubomi obupholileyo belizwe labo.
13 Abazalwana abafudukela kwelinye ilizwe, kwafuneka baqhelane nokuhlala kwindawo entsha, ukusebenza nabazalwana noodade abangabaziyo, mhlawumbi de benze nomsebenzi abangawuqhelanga. Kwafuneka baqhele ibandla elitsha, ukushumayela kwintsimi entsha, mhlawumbi nokuthetha olunye ulwimi. Akululanga ukuqhelana nezo zinto. Sekunjalo, amalungu aseBheteli amaninzi aye asamkela eso sabelo. Ngoba?
14, 15. (a) Abaninzi baye babonisa njani ukuba bayakuxabisa ukusebenza noYehova naphi na? (b) Kutheni bengumzekelo omhle kuthi sonke?
14 UGrethel uthi: “Ndavuma ukufuduka kuba ndandifuna ukubonisa uYehova ukuba indlela endimthanda ngayo ayixhomekekanga kwilizwe, isakhiwo okanye ilungelo endinalo.” UDayska uthi: “Ndathi ndisakukhumbula ukuba esi sabelo sivela kuYehova, ndavuma ngokukhawuleza.” UAndré noGabriela bavumelana naye, kuba bathi: “Sabona ithuba lokukhonza uYehova size sizibeke ecaleni izinto ezifunwa sithi. Sazixelela ukuba, ‘Xa uYehova esenza utshintsho, kubhetele ukuthobela kunokuxhathisa.’”
Elona lungelo likhulu—ukwenza umsebenzi kaYehova!
15 Ngenxa yokudityaniswa kwamasebe, amanye amalungu aseBheteli aye enziwa oovulindlela. Anikwa eso sabelo amanye amalungu aseBheteli xa amasebe aseDenmark, eNorway, naseSweden adityaniswa aba yiofisi yesebe yaseScandinavia. UFlorian noAnja bathi: “Siyasinandipha isabelo sethu esitsha. Kumnandi ukusetyenziswa nguYehova, enoba sikhonza phi na. Siziva sisikelelwe ngokwenene!” Nakuba kusenokungafuneki side senze utshintsho olunjalo thina, ngaba asinakuyixelisa indlela aba bazalwana noodade abakulungele ngayo ukubeka uBukumkani kuqala? (Isa. 6:8) UYehova uhlala ebasikelela abo balixabisayo ilungelo lokusebenza naye, enoba bakhonza phi na.
QHUBEKA UXABISA ILUNGELO LAKHO LOKUSEBENZA NOYEHOVA!
16. (a) AmaGalati 6:4 asixelela ukuba senze ntoni? (b) Liliphi elona lungelo likhulu umntu anokuba nalo?
16 Abantu abangafezekanga bayakuthanda ukuzithelekisa nabanye, kodwa iLizwi likaThixo lisixelela ukuba sinikele ingqalelo kwizinto esikwaziyo ukuzenza. (Funda amaGalati 6:4.) Abaninzi kuthi abanagunya kwintlangano kaThixo. Kwakhona, asinakukwazi sonke ukuba ngoovulindlela, abathunywa bevangeli okanye sikhonze eBheteli. Ewe kona, la ngamalungelo axabisekileyo! Kodwa masingaze silibale ukuba sonke sinelona lungelo likhulu, elokuba ngumsebénzi olidlelane likaYehova entsimini. Eli lilungelo esimele silixabise!
17. Yintoni esisenokungakwazi ukuyenza kuba siphila kweli hlabathi likaSathana, ibe kutheni loo nto ingamele isidimaze?
17 Logama sisaphila kweli hlabathi likaSathana, sisenokungakwazi ukumkhonza ngendlela esifuna ngayo uYehova. Asinakuziphepha iimbopheleleko zentsapho, iingxaki zempilo nezinye iimeko. Kodwa loo nto ayithethi kuthi simele sidimazeke. Ungaze uyijongele phantsi indima onayo yokusebenza noThixo ngokushumayela ngoBukumkani bakhe nanini na ufumana ithuba. Eyona nto ibalulekileyo kukuba usebenza noYehova ngamandla akho onke ibe uthandazela ukuba asikelele abazalwana bakho abakwazi ukwenza ngaphezulu kunawe. Ukhumbule, wonke umntu odumisa igama likaYehova uxabisekile emehlweni akhe!
18. Ziintoni esimele sikulungele ukuzibekel’ ecaleni, ibe kutheni?
18 Nakuba sinobuthathaka yaye singafezekanga, uYehova uyakuthanda ukusebenza nathi. Sikuxabisa ngokwenene ukuba nelungelo lokusebenza noThixo kule mihla yokugqibela! Loo nto imele isenze sikulungele ukuzibekela ecaleni izinto ezininzi esizifunayo, sisazi ukuba kwihlabathi elitsha, uYehova uza kusinika ‘ubomi benene’—ubomi obungunaphakade obuzaliswe luxolo nolonwabo.—1 Tim. 6:18, 19.
Ngaba uyalixabisa ilungelo lakho lokukhonza uThixo? (Funda isiqendu 16-18)
19. Yintoni asigcinele yona uYehova kwikamva?
19 Njengokuba sisondele kakhulu kwihlabathi elitsha, cinga ngamazwi uMoses awawathetha kumaSirayeli ngaphambi nje kokuba angene kwiLizwe Lesithembiso: “UYehova uThixo wakho uya kukwenza ube nokungaphezu kokwaneleyo kumsebenzi wonke wesandla sakho.” (Dut. 30:9) Emva kweArmagedon, abo bebexakekile besebenza noThixo baya kufumana umhlaba abathembise wona. Ngelo xesha, siya kufumana umsebenzi omtsha—ukwenza umhlaba wonke ube yiparadesi!
IMBONISELO (YOKUFUNDISA) Oktobha 2014